Madaxweynihii hore ee Is-maamulka Soomaalida Ethiopia oo ku dhawaaqay inuu iska joojiyey Qareenadda isaga difaacayay. | Dalka Times - News and Politics
Home LOCAL Madaxweynihii hore ee Is-maamulka Soomaalida Ethiopia oo ku dhawaaqay inuu iska joojiyey...
Madaxweynihii hore ee Is-maamulka Soomaalida Ethiopia oo ku dhawaaqay inuu iska joojiyey Qareenadda isaga difaacayay.
Cabdi Maxamuud Cumar waxa uu ku dhawaaqay inuu iska joojiyey Kooxda Qareenadda ee isaga difaacaysay, wuxuuna ku eedeeyey Garsoorayaasha Maxkamadda Federalka Ethiopia inaysan Qareenadiisa u oggolaanin Xuquuqdooda.
Waxa uu si cad u muujiyey inaysan Qareenadiisa sii wadi Karin Difaaciisa, sababo la xiriira Garsoorayaasha iyo Dacwad-oogayaasha oo caqabad ku noqday iyo inuu lumiyey kalsoonidii uu ku qabay Maxkamadda.
Muddadii ay socotay Dhegeysiga Dacwadaasi waxay Garsoorayaasha u sheegeen Dcawad-oogayaasha inay saxaan dacwada ka dhanka ah Cabdi Maxamuud Cumar oo ah Eedeysnaha 1-aad iyo Xamzam Xasan oo iyadana ah Eedeysanaha 43-aad ee Dacwadaha loo haysto.
Dhanka kale Cabdi Maxamuud Cumar oo muddo hal sanno ku xiran Xabsiga waxa uu sheegay inuusan isaga naftiisa sii dfaaci doonin iyo inaysan Qareenadiisa sii wadi doono Difaaciisa, wuxuuna sheegay inuu Maxkamadda u imaan doono oo keliya inuu dhegeysto waxa ay Garsoorayaasha iyo Dacwad-oogayaasha sheegaan.